News Collection: सञ्चिता र ऋचालाई देखेर करिश्मालाई केको डाहा ?
सञ्चिता र ऋचालाई देखेर करिश्मालाई केको डाहा ?
नायिका करिश्मा मानन्धरको सुन्दरताको चर्चा सधै नै हुने गर्दछ । करिश्मा जस्ती राम्री भए पो धेरैको मुखवाट सुनिने कुरा हो यो । तर, नायिका करिश्मा मानन्धर भने अरु नै कसैको रुपमा डाहा गर्दी रहीछन् । यो कुरा करिश्मा आफैले खोलेकी हुन् । नायिका करिश्मा मानन्धरलाई डाहा लाग्ने पात्र अरु कोही नभएर भर्खर आमा वनेकी संचिता लुईटेल र आमा वन्ने तयारीमा रहेकी नायिका क्रृचा घिमिरे हुन् । क्रृचा र सञ्चिताको चिल्लो अनुहार देखेर करिश्मा निक्कै डाहा गरि रहेकी छिन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, आमा वनेका र आमा वन्ने तयारीमा रहेका नायिका देखेर करिश्माले डाहा गर्नुको पछाडी कारण आखिर के हुनसक्छ त ? के करिश्मालाई पुन आमा वन्ने रहर लागेको हो त ? करिश्माले भनिन्, आमा वन्ने सोच भने मलाई छैन । छोरी कविता १७ वर्षको भइसकेकी छिन् । तर, करिश्माले अर्को सन्तानलाई जन्म नदिने वताएकी छिन् । नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा चर्चित रहेका हेयर ड्रेसर लोकेसको नयाँ हेयर सैलुनको उद्घाटनमा पुगेकी यि नायिकाले क्रृचा र सञ्चितालाई देखेर डाहा गर्दै भनेकी हुन् । करिश्माले डाहा गरीरहँदा भने नायिकाद्धय मुस्कुराई रहेका थिए । नायिका सञ्चिता लुईटेल निखिल उप्रेतीसंग विवाह वन्धनमा बाधिएपछि खासै संचारमाध्यममा छाएकी थिईनन् ।